Shafee saving Najib or participating law conference?
Zahida wanita simpanan Shafie dibayar RM1.5 juta?
NAJIB TO VISIT SABAH
Interview:Kanma Masjid and Muslim Properties was destroyed by Burmese Buddhist
So crowded Affiliate Programs! Which unaccompanied adjust I Choose?
'Professional misconduct' if Shafee's secret mission untrue, says Bar Council
Posted: 19 Apr 2012 10:38 AM PDT
"Sebelum ini sudah banyak kali dia (suspek) membantu saya dalam urusan memasukkan duit ke dalam akaun bagi urusan kerja, tapi tidaklah jumlah yang besar sebegini.
"Kebiasaannya saya akan turut sama pergi dan dia hanya menemani. Namun, kali ini saya benar-benar tidak sempat kerana ibu sakit dan saya agak kelam-kabut di rumah bagi menguruskan beberapa perkara," katanya. Menurut Zahida, dia langsung tidak menjangka pemandunya sanggup menghilangkan diri bersama wang RM200,000 itu.
"Sebelum membuat laporan polis, saya ke rumahnya. Maklumlah sudah hampir lima tahun dia bekerja dengan saya, saya kenal anak-anak dan ibunya yang tinggal bersama.
"Mungkin juga dia ada masalah kewangan atau memerlukan duit, jadi saya ke rumahnya untuk bertanya dan berbincang. Namun ibunya hanya memberitahu dia sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Jadi, saya tiada pilihan selain melaporkannya kepada polis," katanya. -hmetro (3 Mac 2012)
Source: Malaysian Insider- Top US colleges to offer free classes online
STANFORD (California), April 18 — Five prestigious US universities will create free online courses for students worldwide throughanew, interactive education platform dubbed Coursera, the founders announced today.
Classes on Coursera will be designed and taught by professors at Stanford, among other leading US universities.
Coursera will offer more than three-dozen college courses in the coming year through its website at coursera.org, on subjects ranging from Greek mythology to neurology, from calculus to contemporary American poetry. The classes are designed and taught by professors at Stanford, Princeton, the University of California at Berkeley, the University of Pennsylvania and the University of Michigan.
Founders Daphne Koller and Andrew Ng say Coursera will be different because professors from top schools will teach under their university's name and will adapt their most popular courses for the web, embedding assignments and exams into video lectures, answering questions from students on online forums — even, perhaps, hosting office hours via videoconference.
A course Ng taught in artificial intelligence was just as popular: Nearly 25,000 students completed most of the work — and 13,000 scored high enough to earna"statement of accomplishment" from Stanford. Some even translated the lectures into their native languages and posted subtitles. "People really get engaged," Ng said.
KUALA LUMPUR, 18 APRIL, 2012: The driver of Zahida Rafik has exposedascandal allegedly involving the actress and Rural and Regional Development Minister Datuk Seri Shafie Apdal throughapolice report he had lodged on March 13, reported Keadilan Daily.
The police report claimed that Shafie had paid Zahida up to RM1.5 million in four months of their "intimate relationship" that has spanned three years.
The police report was lodged by one Noor Azman Azemi, 38, on March 13 at the Ampang police station.
He said he had lodged the report following an accusation by the actress on March3that he had absconded with RM200,000.
According to the report, Noor Azman's relative then gaveacopy to Ampang MP Zuraida Kamaruddin, who revealed the contents to reporters at the Parliament lobby today and questioned the source of the minister's funds.
Zuraida claimed that the actress had received RM58,000 last October, RM112,000 in November and RM330,000 in December, as well as RM510,000 in January this year.
Reading from this, she said Noor Azman claimed to have been assigned by the minister to work asadriver to the actress three years ago.
According to Noor Azman, the minister told him to keep tabs on the actress' "every movement".
He also described himself as the "trusted middleman" who helped channel the funds into her personal account.
He further claimed in the report that the minister would secretly meet the actress each week in hotels around Kuala Lumpur.
"At every meeting, (the minister) would hand over RM100,000 to RM200,000... the cash would be taken by me and (the actress) to be credited into (her bank) account in Menara Perkeso, Jalan Ampang," alleged Noor Azman.
He said he had resigned on Feb 29 this year, as he could not manage the pressure of working for the minister.
Posted: 19 Apr 2012 03:48 AM PDT
***BERANI KERANA BENAR.MAKAN SENDIRI CARIK.HIDUP SENTISE COOL.AWEK JE YANG TAKDE.***
Posted: 19 Apr 2012 03:07 AM PDT
So this morning, I took the boy to the airport. He's in transition, having completed his Diploma at the Tunku Abdul Rahman College but waiting to resume his Advanced Diploma or Degree studies either at the same college or the Universiti Tunku Abdul Rahman. Both are supposed to begin in September and that's still some four or five months away.
While waiting, he has been looking for some jobs to do. He let go ofapart-time job at an eatery at the Precinct 10 in Tanjung Tokong last February and had been moping around the house. At my suggestion, he applied to some positions advertised at JobStreet.com but regrettably, nothing had come out of them. So much for the effectiveness of my former employer that my own son was unable to getaresponse from the advertisers.
မြန်မာအတွင်းသို့ ရောက်ရှိအခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသော အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များမှာ (၁) အာရဗ်များ၊ (၂) ပါရှန်း၊ (၃) တရုတ်၊ (၄) ကသည်းများ၊ (၅) အိန္ဒိယသားများနှင့် (၆) အခြား လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။
(၁) အာရပ်များ ပုဂံခေတ် ပိဿုံမင်းလက်ထက် အေဒီ(၇)ရာစု တွင် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ များဖြစ်သည့် သထုံ၊ မုတ္တမသို့ဝင်ရောက် နေထိုင်ကြခဲ့သည်။
ရခိုင်ဘုရင် မဟာ တိုင် စန္ဒလက်ထက် (အေဒီ ၇၈၈-၈၁၀)တွင် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်၍ ကမ္ဘာ့အရှေ့ဖျား တရုတ်ပြည် သို့ကုန်ကူးရာ ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီးတွင် သင်္ဘောပျက်၍ ရမ်းဗြဲကျွန်းတွင် ၀င်ရောက် နေထိုင်ခဲ့ကြ သည်။ အေဒီ(၁၄)ရာစုတွင် ကုန်သည်တချို့သည် မြိတ်မြို့တွင် ၀င်ရောက် နေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ (၂) ပါရှန်းများ အာရဗ်ကုန်သည်မျးနည်းတူ ကုန်ကူးသန်းရာမှ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ အေဒီ(၁၃)ရာစု တွင် ယခင် ပသီမြို့(ယခု ပုသိမ်)ကို ၀င်ရောက် နေထိုင်ခဲ့ကြ သည်။ ပုသိမ်မြို့ကို ကုလားပသီမင်း (၃)ဆက် အုပ်စိုးခဲ့သည်။ (၁) ပသီမင်း[နန်းစံသက် ၈-နှစ်] (၂) အော်လန်တေးမင်း [နန်းစံသက်-၁နှစ်] (၃) အက္ကဘတ်မင်း[နန်းစံသက်၃-နှစ်] (၃) တရုတ်များ မြန်မာသက္ကရာဇ်(၆၄၃)ခု နရသီဟ ပတေ့မင်း(တရုတ်ပြေးမင်း) လက်ထက်တွင် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း တရုတ် ပြည်ဘက်တွင် တရုတ်မောင်းဂွတ်ဘုရင် ကုဗလေခန်ရဲ့ တာရ်တာရ်စစ်သည်များ ပုံဂံကိုဝင် ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၂၈၁-ခုနှစ်၊ ဒုတိယတရုတ်မြန်မာ စစ်ဖြစ်ပွား သည့် အချိန်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီး နဇရွတ်ဒင်ခေါင်းဆောင်သော တာရ်တာရ် စစ်သည်များ သည် ကောင်းစင်(ယခု ဗန်းမော်မြို့)ကို သိမ်းပိုက်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ (၄) ကသည်းများ ၁၈၂၁-ခုနှစ်တွင် မဟာဗန္ဓုလဦးစီး သည့် တပ် များသည် အာသံ(ကသည်းပြည်)သို့ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ အောင်နိုင်သဖြင့် ကသည်း သုံ့ပန်း (၄၀၀၀၀) ကျော် ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ထက်ဝက်ခန့်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များဖြစ်သည်။ (၅) အိန္ဒိယ သားများ အိန္ဒိယပြည်ဘက်မှလည်း အိန္ဒိယ၊ မဂိုများ၊ ဘင်္ဂါလီများသည် ကုန်းကြောင်းမှနေ၍ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း ဥဒယိုဝင်ထွက်သွားလာခဲ့ကြသည်။ အနောက်ဘက်လွန်မင်း (၁၆၀၅-၁၆၂၈)ခုနှစ်တွင် တောင်ငူဘုရင် နတ်သျင်နောင် နှင့် စစ်ဖြစ်ပွားရာ နတ်သျင်နောင်က သံလျင်စား ငဇင်ကာထံ အကူအညီတောင်းခံသဖြင့် ငဇင်ကာက သင်္ဘော (၄)စီးစေလွှတ်ခဲ့ရာ အစ္စလာမ်သာသနာ ၀င်များပါဝင် ခဲ့သည်။ စစ်ပွဲတွင် အနောက်လွန်မင်းကစစ်နိုင်သဖြင့် ငဇင်ကာ နှင့် နတ်သျင်နောင်ကို ကွပ်မျက်ခဲ့ သည်။ သုံ့ပန်းများကိုမသတ်ဘဲ နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအား နေရာအတည်တကျချထားပေးပုံ အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားကြီးသည် စစ်သုံ့ပန်းများကို အင်းဝမြို့၊ မြစ်သာမြစ် မြောက်ဘက်တွင် နေရာ အတည်တကျချထားပေးခဲ့သည်။ အစ္စလာမ်သာသနာဝင် များ အတွက် ရွှေဘို၊ ကျောက်တည်၊ စစ်ကိုင်းနယ်များတွင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ေ နထိုင်ရန် မြေနေရာများ ကို တည်တကျချထားပေးခဲ့သည်။ စနေမင်းလက်ထက် (၁၆၂၈-၂၆၄၉) ခုနှစ်တွင် အစ္စလာမ် သာသနာဝင် များအတွက် တောင်ငူ၊ ရမည်းသင်း၊ ညောင်ရမ်း၊ ယင်းတော်၊ မိတ္ထီလာ၊ ပင်းယ၊ တဘက်ဆွဲ၊ ဘောဓိ၊ စည်သာ၊ စည်ပုတ္တရာ၊ မြေဒူး၊ ဒီပဲရင်း စသော မြို့ကြီးများတွင် နေရာအတည် တကျ ချပေးခဲ့သည်။ ညောင်ရမ်းခေတ်လွန် ကုန်းဘောင်ခေတ် ဘိုးတော်ဗဒုံမင်းလက်ထက် (၁၈၀၁) – ခုနှစ်တွင် အမရပူရနယ်အတွင်းရှိ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များအတွက် ဗုံးအိုး၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ စားကြင်ဝရွာများတွင် နေရာအတည် တျကချပေးခဲ့သည်။ နောင်အခါ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဆက်နွယ်ပေါက်ဖွား လာသော အစ္စလာမ်သာသနာဝင် တိုင်းရင်းသားများ သည် ရမည်းသင်း၊ ယင်းတော်၊ ပျဉ်းမနား အစရှိသည့်မြို့ကြီးများတွင် အစုအဝေးလိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤကဲ့သို့သော အစ္စလာမ် သာသနာဝင် တိုင်းရင်းသားများမှာ ဗမာဘုရင်များလက်ထက်တွင် ပသီလူမျိုးဟု အသိ အမှတ်ပြုခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ (၄၇၀၊ ၄၈၂၊ ၅၁၄)၊ ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး တတိယတွဲ စာမျက်နှာ(၆၊ ၈၆၊ ၉၀၊ ၁၃၅၊ ၂၃၆၊ ၃၁၉) တို့တွင် ပါရှိသည့်အထောက်အထားများအရ ဗမာဘုရင်များလက်ထက် တွင် ပသီလူမျိုးအဖြစ် အခိုင်အမာ တည်ရှိ ခဲ့သည်။ ဗမာပြည်အား အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့များ သိမ်းယူပြီး နောက်ပိုင်းမှစ၍ ၁၉၃၁-ခုနှစ်အထိ ပသီလူမျိုးများအား ဇေတဘာဒီ လူမျိုးဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရ သူများဖြစ်သည်။ ၁၉၃၁-ခုနှစ်မှ ယနေ့မျက် မှောက်ကာလအထိ ဗမာမွတ်စလင်မ်များ ဟု အသိအမှတ် ပြုခြင်း ခံနေရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ဗမာမွတ်စလင်မ် တနည်းအားဖြင့် ပသီများဟု သတ်မှတ် ခံနေရသူများသည် လူမျိုးတစ်မျိုး တည်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ မျိုးတူစုတစ်စုတည်းမှ ဆင်းသက် လာခြင်း မဟုတ်ပါ။ သွေးတူစု၊ ဇာတ်တူစုတစ်စုတည်းမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော လူမျိုးများမှ ရောနှောပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးတစ် မျိုးသည် လူမျိုးပေါင်းစုံမှ ရောနှောပေါက်ဖွားလာ တတ်ခြင်းကို အောက်ပါ သာဓကများ အရ သိနိုင် ပေသည်။ ယနေ့ဗမာလူမျိုးသည် ဗမာလူမျိုးအဖြစ် စတင်ပေါ်ပေါက် ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ (ပျော့၊ ပျူ၊ ကမ်းယံ၊ သက်၊ ရခိုင်၊ ထားဝယ်၊ တိဘက်)စသည့် လူမျိုးများမှ ရောနှောပေါက် ဖွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားထင်ရှားကျော်ကြားသည့် လူမျိုးအချို့သည် လည်း ဤနည်းပင်ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ် အီတလီ လူမျိုးများသည် ကျူထရွန်၊ အီထရပ်စက်၊ ရောမ၊ ဂရိတ်၊ အာရဗ် စသည့်လူမျိုးများမှ ရောနှော ပေါက်ဖွား လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးများသည်လည်း ဂေါ်လ်၊ ဘရီထွန်၊ ကျူထရွန် စသည့်လူမျိုးများမှ ရောနှော ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဗမာမွတ်စလင်များ (၀ါ)ပသီများ သည်လည်း နိုင်ငံခြားမှ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ အိမ်ထောင်စုများမှ ဆင်းသက် လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ အထက်ဖော်ပြပါ လူမျိုးများမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်မှာ အခိုင်အမာပြနိုင်ပါသည်။ မြန်မာ ဘုရင် များ လက်ထက်တွင် နေထိုင်ရန်ဒေသများထူထောင်ပေးပြီး ပသီလူမျိုးအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုခဲ့ခြင်း မှာ ရာဇ၀င် အစောင်စောင်တို့အရ ထင်ရှားပေသည်။ လူမျိုးဆိုသည်မှာ 'လူမျိုးဆိုသည်မှာ အခြေခံ အားဖြင့် လက္ခဏာ(၄)ရပ်နှင့်ကိုက်ညီသည့် လူ့အစုအဝေးတစ်ရပ်ဖြစ်ရမည်။
တိကျသောလူ့ အစု အဝေးတစ်ရပ်ဖြစ်ရမည်။ ဤလူ့အစုအဝေးသည် အမျိုးအနွယ်လိုက် လည်း မဟုတ်။ မျိုးရိုးဇာတိ အရလည်းမဟုတ်။ သမိုင်းရေးရာအရ ဖွဲ့စည်းမိလာသော အဖွဲ့အစည်းတစ် ရပ်သာ ဖြစ်ရမည်'ဟု အဆိုရှိခဲ့သည်။
ဤလူမျိုးရေးလက္ခဏာကြီး(၄)ရပ်သည် ကမ္ဘာကမငြင်းနိုင်သည့် လူမျိုးရေးတိုင်းတာချက် လက္ခ ဏာ (၄)ရပ်ဖြစ် ပေသည်။ (၁) ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူထုကြီးတစ်ရပ်လုံးသည် ဗမာနိုင်ငံ တွင်ရှိ သည့်လူများစုသုံးစွဲနေသည့်စကားကိုပင် တူညီစွာ အများစုသုံးစွဲပြော ဆိုနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် တူညီ စွာ ပြောဆို သည့်ဘာသာစကားရှိပါသည်။ လူမျိုးတစ်မျိုး ဖြစ်ရန်အတွက် သီးခြားဘာသာစကား တစ်ရပ်မလိုပေ။ ဘာသာစကားတစ်မျိုးကို လူမျိုး(၂)မျိုး (၃)မျိုး သုံးစွဲနေသော သာဓကများ ကမ္ဘာ တွင်ရှိပါသည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့်အမေရိကန် လူမျိုးတို့ သည် ဘာသာစကားတူညီကြသည်။ သို့သော် လူမျိုး မတူ။ နော်ဝေဂျင်းနှင့် ဒိန်းလူမျိုး၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် အိုင်းရစ်လူမျိုးတို့သည် လူမျိုးမတူကြသော်လည်း ဘာသာစကား တူညီကြသည်။ တရုတ်ပြည်တွင်လည်း ဟံလူမျိုးနှင့်ဟွီလူမျိုး များသည်လူမျိုးချင်း မတူသော်လည်း ဟံဘာ သာစကား ကိုသာ ပြောဆိုသုံးစွဲကြသည်။ (၂) တူညီစွာ နေထိုင် မှုဒေသဆိုသည်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုးသည် သီးခြားပြည်နယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် နေထိုင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဒေသ တော်တော် များများတွင် ပြန့်ကြံနေထိုင်မှုမျိုးလည်းရှိသည်။ ဟိုတစ်စုသည်တစ်စု နေထိုင်ကြ သော်လည်း တစ်ပြည်လုံးအနေနှင့်ကြည့်လျင် အစုအဝေးပေါင်းများစွာ စုစည်းနေထိုင်မှုရှိ/မရှိ စံနစ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ပုံစံတူညီစွာ နေထိုင်မှု ရှိ/မရှိသာလျင် အဓိကဖြစ်သည်။ သီးခြားပြည်နယ် မရှိသော်လည်း သီးခြားလူမျိုး တစ်မျိုးဖြစ်နေခြင်းကို ကမ္ဘာတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ (ဥပမာ တရုတ်ပြည်ရှိ အိုလွန်ချွန်လူမျိုးစုကလေး သည် တရုတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးမှ လူဦးရေ (၂၀၀၀)ခန့်သာရှိပေသည်။ လူဦးရေ(၂၀၀၀)လောက်မှာ (၂)စုလောက်သာကွဲ နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပြန့်ကြဲနေထိုင်ကြ သည်မှာ ထင်ရှားပေသည်။ တရုတ်ပြည်၏ ဟွီလူမျိုးနှင့်အိုလွန်ချွန်လူမျိုးတို့၏ ပြန့်ကြဲနေထိုင်မှုပုံစံနှင့် ဗမာမွတ်စလင် (၀ါ)ပသီလူထု ၏နေထိုင်မှုပုံစံသည် အလွန်နီးစပ်လှပေသည်။ ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီ များ၏နေထိုင်မှု သည် ကျေးရွာ ကြီးများတွင် ရွာလုံးကျွတ်နေထိုင်ကြခြင်း၊ မြို့ကလေးများတွင် အတန်း လိုက် အစုလိုက်နေထိုင်ကြခြင်း၊ မြို့ကြီးများ တွင် ရပ်ကွက်ကြီးများအလိုက်နေ ထိုင်ကြခြင်းကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ [ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူမျိုးစုသည် သီးခြား နယ်နိမိတ်သတ်မှတ် ချက်ဖြင့် နေထိုင်ကြသည့်လက္ခဏာမရှိပေ။ ပြန့်ကြဲနေထိုင်ကြသည့် လူမျိုးစုဖြစ်သည်။] (၃) တူညီသည့် စီးပွားရေး ဘ၀ စီးပွားရေးစုစုစည်းစည်းရှိ သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပေသည်။ ဗမာနိုင်ငံသည် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဗမာ့စီးပွားရေးသော့ချက်သည် ဆန်စပါးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၄င်းဆန်စပါး လုပ်ငန်းကို ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီ လူမျိုးအများ စုလည်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ အခြားလူ့ အစုအဝေး ကိုကြည့်လျင် အလုပ်သမား၊ မြို့နေလူတန်းစား စီးပွားကုန်သွယ်ရေးသမားများ၊ ပညာတတ်များ၊ စာရေးစာချီများရှိသည်။ ယနေ့ မြန်မာပြည်၏ စီးပွားရေးစနစ်တစ် ခုတည်း၏အောက်တွင် စုစုစည်းစည်းရှိကြခြင်း ရှိသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ (၄) ဗမာမွတ်စလင်မ် (၀ါ)ပသီ လူမျိုးစုတစ်ရပ်လုံးမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော နေထိုင်စားသောက်ပြောဆို ဆက်ဆံရေးများသည် တူညီသည့်စိတ်နေ သဘောထားမှ ထုတ်ဖော်ပြသချက်များဖြစ်သည်။ လူမျိုးစုတစ်ရပ်လုံးမှ ယဉ်ကျေးမှု များသည် လူမျိုးစုတစ်ရပ်တွင်တူညီစွာရှိနေကြသည်။ ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူမျိုးစု၏ ယဉ်ကျေးမှု သည် ကိုးကွယ်ရာဘာသာနှင့်တွဲနေခြင်းရှိသည်မှာ အခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ယှဉ်ကြည့် လျင် မတူညီသည့် ယဉ်ကျေးမှုရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပြီး ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီလူမျိုးစု တစ်ရပ်လုံးအတွက်မူ တူညီသော ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြသသော တူညီသည့်စိတ်နေ စိတ်ထားရှိသည်ကို အခိုင်အမာတွေ့ရှိရသည်။
အထက်ပါလက္ခဏာကြီး(၄)ရပ်အပြင် (၁) လူမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပုံအထောက် အထားခိုင်လုံခြင်း၊ (၂) သမိုင်းရေးအရ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ခိုင်မာလျက်ရှိခြင်း၊[လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ကျော်မှ စ၍ သမိုင်းရေးရာအရ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့် အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ(၄)ရပ် ချို့ယွင်းမှုမရှိ ဘဲ ခိုင်မြဲစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။] (၄) အနာဂတ်အတွက်လည်း တည်ငြိမ်စွာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် လျက်ရှိခြင်း အစရှိသည့် အထောက်အထားများအရ လူမျိုး တစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ် သည်။ အတိတ်ကာလ၊ ယနေ့ မျက်မှောက် ကာလနှင့် အနာဂတ် ကာလများတွင် အထက်ဖော်ပြပါ လူမျိုးရေး လက္ခဏာ ချက်များအရတွေ့ရှိသည်မှာ ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီများသည် အတိတ်ကာလ အတော်ကြာကပင် လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ပီပီသသ ရှိနေပါ သည်။ ယနေ့ ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ) ပသီလူမျိုးစုသည် အတိတ်ကာလ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် မိမိလူမျိုးရေး ကို ဖုံးကွယ်ထားရခြင်းဖြစ်သည်။ အတိတ်မှ လူမျိုးစုပြန် လည်ပေါ် ထွက်လာရန် ပြန်လည် ဖော် ထုတ်ကြရပေမည်။ဗမာမွတ်စလင်မ်(၀ါ)ပသီ လူထုတစ်ရပ်လုံးအား လူမျိုးပီသနေခြင်းကို တိုင်းပြည် နှင့်ကမ္ဘာက အသိအမှတ် ပြုလာစေ ရေးအတွက် ထူထောင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုကိုလေး(ဗပက)@ ပသီဦးကိုကိုလေး။ ၁၉၅၀ ကျော် ၆၀ ၀န်းကျင်က ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ "ခေတ်(၅) ခေတ်နဲ့ လူတန်းစားပြဿနာ"ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေ ကောက်နှုတ်ပြီး ၂၀၀၅-ခုနှစ်လောက်က နေရာတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးဖူးတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်ပြီးတင် ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအနှုန်းများကို မူရင်းစာအုပ်ထဲမှအတိုင်းသာ ကူးယူထားပါသည်။
Posted: 19 Apr 2012 03:13 AM PDT
In an article posted in Fitness, Gary Allen believes that physical activity and exercise can make your life better. According to him:
The many benefits of exercise and physical activity are widely known. If people only knew the real benefits that exercising can provide they might be willing to try again. When you find an incentive powerful enough to outperform the excuses, you will exercise Ultimately, it'sayes or no decision that every person will have to make for him or herself. The hope is that you will find motivation in these three benefits of physical activities and exercises.
If you want to strengthen your bones, there areavariety of ways to do this, and they don't necessarily involve jogging, running or even walking. One enjoyable activity that can improve your overall fitness is dancing. Any weight bearing exercise, and this includes dancing, is very beneficial. These type of exercises are great for your overall fitness, and especially for the health of your bones. Weight training or other resistance training exercises are also good to do, as they'll increase your bone mass, as well as keep your whole body strong. If you'reawoman, you should definitely do resistance training, as lots of women experience osteoporosis and other problems connected to decreased bone mass.
Regular and consistent exercise makes your immune system stronger, more resilient, and better able to fight off common illnesses such as cold and flu viruses. It's no doubt that the process is highly complicated. The blood circulates better when you exercise regularly. This leads toahigher level of oxygen in the blood andabetter overall immunity response to foreign matter.
Posted: 19 Apr 2012 02:28 AM PDT
TODAY, 19 April 2012, is the last day of the Dewan Rakyat sitting. It has beenamarathon persidangan especially this week.
On Monday and Tuesday, Dewan ended 9.30pm. Last night was 11.55pm. Tonight, the Aturan Urusan Mesyuarat (we fondly call it AUM) is HINGGA SELESAI, meaning Dewan will end only after the AUM of the day is completed.
There are eight bills today, the major ones are amendments on the Election Offences Bill and Universities and University Colleges Bill.
Next week, the Dewan Negara will begin its three-week session, before ending on May 10.
I have heard so much debates, and craps (more of the latter I think).
My boss will be going back to KK tomorrow. At about the same time, the PM will be there, foratwo-day visit as per Bernama report below. Dare I dream that the PM will announce the setting up of the RCI on Illegal Immigrants?...
KOTA KINABALU, April 18 (Bernama) -- Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak is scheduled to visit Sabah on Friday and Saturday.
According toastatement issued by the Press and Publication Office of the Chief Minister's Department, the prime minister would haveapacked itinerary.
Shortly after arrival on Friday afternoon, the prime minister will attend the Malaysian Trust Fund Week 2012 at Likas Sports Complex, here.
He will later leave for Sandakan on the state's east coast to attend the 1Malaysia gathering with the people for the Sandakan and Batu Sapi parliamentary constituencies at Dewan Hakka.
The next day, the prime minister is schedule to go forawalkabout at Taman Mawar and Bandar Kim Fung, Sandakan, before returning to the national capital. -- BERNAMA
Posted: 19 Apr 2012 02:09 AM PDT
Posted: 19 Apr 2012 04:45 AM PDT
...... "Seorang jejaka dengan nama Daniyar dengan nama akhir yang pelik, dilihat tidak kurang kontroversinya daripada ibunya dalam hal perkahwinan. Terdapat khabar bahawa beliau telah menawan hati Nooryana Najwa, anak perempuan Perdana Menteri Malaysia, dan akan mengahwininya tidak lama lagi," tulis Leonid Komarovskiy, seorang "wartawan" daripada New York di bawah artikel bertajuk "Borat is out of competition."
Keseluruhan artikel Leonid menyentuh tentang latar belakang Daniyar, yang didakwanya mempunyai kehidupan yang serba mewah dan penuh kontroversi kerana nama akhir "Nazarbayev" yang diberi ibunya selepas penceraiannya dengan suami terdahulu D. Kesikbayev sebelum berkahwin dengan Bolat Nazarbayev, seorang ahli kerabat Presiden Kazakhtan.
"Pada Oktober 2006, New York Post telah melaporkan Daniyar Nazarbayer, yang dinamakan di dalam tulisan mereka sebagai 'anak kepada President Nursultan Nazarbayev', telah membeli beberapa apartment di 55 Wall Street.
Salah satu apartment dengan dua bilik bernilai $2.9 juta dan satu lagi dengan satu bilik bernilai $2.1 juta. Saya tak tahu ia benar ataupun khabar angin, tapi akhbar melaporkan bahawa 'President Nazarbayev telah melawat rumah tersebut sendiri semasa menghadiri UN Summit (Persidangan PBB) dan memberikan kebenaran untuk pembelian tersebut. Ia nampaknya melibatkan banyak duit," tulis Leonid lagi.
"Beliaulah yang dapat menawan Bolat Nazarbayev ke jaringannya – satu saudara tulen (ada yang mengatakan ialah adik-beradik) kepada President Kazakh – dan berkahwin dengannya, supaya dapat cepat-cepat melupakan suami dulu D. Kesikbayev, yang nama akhirnya dimiliki Daniyar sebelum menerima surat lahirnya yang kedua dengan nama akhir Nazarbayev," dakwa Leniod lagi.
"Mengapa tidak (untuk berkahwin dengan Daniyar)? Seorang jejaka terkenal, penuh adunan dan dengan nama akhirnya yang cukup menawan… tapi, jika saya ialah bapa Malaysia, saya akan semak dulu takut-takut: adakah Daniyar sudah berkahwin semasa zaman muda? Buah epal adalah dari pokok epal, seperti yang kita tahu… dan Alma-Ata (ibu kota Kazakhstan) ialah bandar buah epal dan pokok epal," nasihat Leonid.
Posted: 19 Apr 2012 12:44 AM PDT
Nowadays there are rife internet marketers and online gurus, who apologize for to sell the capital turn article programs. However, is this the truth and the reality? The answer is plain further simple "No"! surpassingly of the article spinners that are promoted to typify effective actually produceatotal non-sense content, which is good neither for
Posted: 19 Apr 2012 12:43 AM PDT
A new deliberate seemly common inapliable come of the rag Obesity has stripped that thin people eat very differently than serious folks at all-you-can-eat rock restaurants. Researcher Brian Wansink and his team from the Cornell University Food and pen name Laboratory observed diners at 11 single Chinese buffet restaurants across the United States. Their
Posted: 19 Apr 2012 12:42 AM PDT
Our master has four sinus cavities. They areavery important part of our body. Infection or inflammation in the cavities can cause immense pain and pressure. Sinusitis refers to the sickness caused by an inflamed, infected or mucous filled sinus tunnel. hieroglyphics further symptoms of sinus illness are corresponding to those ofacommon cold. The
Posted: 19 Apr 2012 12:41 AM PDT
There are four sinus cavities located agency the head. These cavities reduce the weight of the skull, insulate sound again allow the voice to rebound in it. These cavities are just now connected to the nasal passage. These cavities become infected due toaviral infection, wintry or possibly an allergy. There are several ways of detectingasinus infection
One image contract profitawide array of manipulations in Photoshop CS3. Using only filters already built in to the program, users can render the same file into at odds images foravariety of applications. This tutorial highlights some plain sailing effects which guilt be achieved in justafew steps.Open Photoshop CS3; and hence open component
Posted: 19 Apr 2012 12:40 AM PDT
Ask questions first before you splice an affiliate program. carry outalittle prospect about the choices of program that you intend to join into. enact some answers because they cede be the deciding point of what you will be achieving budgeted on. Will it payment you fact to join? mightily affiliate programs for offered today are certainly free of